दुई वटा गैँडा नियन्त्रणमा
नारायणगढ, २३ चैत । शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु निकुञ्जमा लैजान चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको टोलीले मंगलबार दुई वटा गैँडालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र कँडेलका अनुसार, बिहान ८ बजेतिर अन्दाजी १० वर्षको एउटा अर्धवयस्क भाले गैँडालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । बिहान ११ बजेतिर अर्को अर्धवयस्क पोथी गैँडालाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो । सोमबार नै शुक्लाफाँटामा एउटा भाले गैँडा लगिएकोले मंगलबार समाइएको भाले गैँडालाई भने बर्दियामा लगेर छाडिने उनले जानकारी दिए ।
सोमबार पठाइएको उक्त गैँडालाई मंगलबार करिब १ बजेतिर शुक्लाफाँटामा छाडिएको छ । निकुञ्जमा समाइएका दुई वटा गैँडालाई मंगलबार नै पठाइएको छ । चितवन निकुञ्जको पश्चिम क्षेत्रमा डार्ट गरेर बेहोस बनाई नियन्त्रणमा लिइएको अन्दाजी १६ वर्षको वयस्क भाले गैँडालाई शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज पठाइएको थियो ।
मुग्लिन नारायणगढ सडकखण्डमा पहिरो दुई जनाको मृत्यु, दुई घाइते, खुल्यो अवरुद्ध सडक
नारायणगढ, २२ चैत । मुग्लिन नारायणगढ सडकखण्ड अन्तर्गत चितवनको कविलास, घुमाउने भन्ने ठाउँमा सुख्खा पहिरो खस्दा दुई जनाको ज्यान गएको छ ।
सोमबार बिहान १०ः४० बजेको समयमा सडकमाथिको पहाडबाट पहिरो खस्दा मोटरसाइकलमा सवार एक जना र ट्याङकरका सहचालक एक जनाको मृत्यु भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख सन्तोष पन्तले जानकारी दिए । उनका अनुसार, मृत्यु हुनेमा लमजुङ, भोटेओडार घर भएका ४५ वर्षीय रेशराज राना र ट्याङकरका सहचालक भारतको बेतियाका २५ वर्षीय विनयकुमार कोइरी रहेका छन् ।
पहिरोले पुरेर घाइते हुनेमा मृतक रेशराज रानाका छोरा संदिप राना र वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका १८ का बनु पटेल रहेका छन् । पहिरोमा बा १० प ४८४४ नम्बरको मोटरसाइकल, ग १० प ४८४४ नम्बरको मोटरसाइकल, ना ४ ख ५४१९ नम्बरको ट्याङ्ककर, रा १ ख ७८९ नम्बरको मिनिट्रक, ना ६ ख ६६६४ नम्बरको मिनिट्रकमा क्षति पुगेको छ । पहिरोले ट्याङ्ककर, मिनिट्रक र मोटरसाइकलमा पूर्णरुपमा क्षति पुगेको छ । अन्य सवारी साधनमा आंशिक क्षति पुगेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ ।
सडक मर्मतमा कार्यरत प्राविधिक टोली, सेना र प्रहरीको सहयोगको खसेका पहिरो पन्छाएर सडक सञ्चालनमा ल्याएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख पन्तले बताए । नारायाणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड निर्माणको क्रममा रहेको छ । हरेक दिन बिहान १० बजेपछि सावरी साधन रोकेर मर्मत कार्य गरिँदै आएको छ ।
दुर्घटना भएको दिन सोमबार पनि १० बजेपछि दुबैतर्फ सवारी साधन रोकिएको थियो । सडकखण्डको बीचमा रहेका सवारी सडकमा निकासको लागि गुडिरहेका थिए । प्रहरीले दिएको सूचना अनुसार बिहान १०ः४० मा कविलासको घुमाउनेमा सुख्खा पहिरो खस्यो । सडक खण्ड पार गर्ने क्रममा रहेका थोरै सवारी साधन पहिरो खसेपछि दुर्घटनामा परे ।
कविलासको घुमाउनेमा पुग्दा राना आफ्नो छोराका साथ मोटरसाइकलमा मुग्लिनतर्फ जाँदै थिए । बा १० प ४८४४ मोटरसाइकलमा यात्रा गरिरहेका रानाका छोरा सन्तोष राना घाइते भएका छन् । घटनामा मोटरसाइकल चालक रेशराज रानाको मृत्यु भयो ।
घटना लगत्तै नजिकै सिमलतालमा रहेको प्रहरी पोष्टले जिल्लामा जानकारी गराएको थियो । त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्ट, प्रहरी उपरीक्षक दिपक थापा लगायत सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनाको टोली घटनास्थल पुगेको थियो । मुग्लिनतर्फबाट गएको एक्साभेटरले पुरिएका गाडीलाई निकाल्ने र पहिरो पन्छाउने काम गरेपछि सडक साँझबाट सञ्चालनमा आएको छ ।
नारायणगढ मुग्लिन सडकखण्डमा पर्ने घुमाउने ठुलो पहाड भएकाले काटेर सिधा बनाउने काम भइरहेकोे स्थान हो । घुमाउरो सडक र चुच्चो परेको पहाड भएकाले घुमाउने भनिएको हो । पहाडको माथि भागबाट फोडेर फराकिलो बनाउने क्रम चलिराखेकाले पहिरो गएको अनुमान गरिएको छ । सडक निर्माणको क्रममा त्यही ठुलो घुमाउरो मोडलाई हटाउनका लागि नारयाणगढ मुग्लिन सडक निर्माण आयोजनाले ठुलो पहरोलाई दुई तर्फबाट काटिरहेको थियो । पहरो फुटाउनको लागि खनिएको ट्रयाकभन्दा माथिको भाग खसेको हो ।
नारायणगढ मुग्लिन सडक बिस्तारको लागि घुमाउनेको पहाड नै हटाएर बाटो सिधा बनाउने काम भइरहेको छ । नारायणगढ मुग्लिन सडकखण्ड ओहोरदोहोर गर्दा घुमाउनेको मोड सबैले देखेकै मोड हो । यो ठाउँको पूरै पहाड हटाउन लागिएको थियो । डाँडोको टुप्पामा गएर एक्साभेटर र ‘रक ब्रेकर’ ले पहाड खोस्रने र फुटाउने गरेको देख्दा तलबाट हेर्नेहरु नै डराउने अवस्था थियो ।
झण्डै ५० मिटर अग्लो पहाडको टुप्पामा एक्साभेटरले पहाड खन्दै गरेको थियो । निकै कडा चट्टान भएका कारण थोरैथोरै मात्र काम गर्न सकिएको नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाका इन्जिनियर शिव खनालले बताए । यो पहाड पन्छाउँदा ४० हजार घन मिटर ढुंगा र माटो निस्कने अनुमान छ । घुमाउनेमा अहिले सडकको चौडाइ लगभग छ मिटरमात्रै छ । पहाड काटेपछि सो ठाउँको सडक २० मिटरको हाराहारीमा चाक्लो हुने इन्जिनियर खनालले बताए ।
एसियाली मापदण्डको दुई लेनको सडक बनाउनका लागि बिस्तारको काम भइरहेको छ । यो सडकका धेरै ठाउँमा अहिले दुई वटा गाडी एकैचोटी ओहोर दोहोर गर्न गाह्रो हुने अवस्था छ । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार आयोजना अन्तर्गत सडक बिस्तारको काम भइरहेको छ ।
करिब तीन अर्ब रूपैयाँको लागतमा भइरहेको सडक बिस्तारको काम दुई वर्षभित्र सक्ने गरेर सन् २०१५ को अप्रिलमा विभिन्न निर्माण कम्पनीहरुसँग सम्झौता भएको थियो ।
भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण काम हुन नसकेको भन्दै निर्माण सम्पन्न अवधि सन् २०१७ को सेप्टेम्बरसम्म थप भएको छ । तर काम लक्ष्य अनुरुप हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म ५० प्रतिशत काम पुरा हुनुपर्नेमा ४० प्रतिशतको हाराहारीमा सकिएको नारायणगढ मुग्लिन सडक आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।
महिला नेतृत्व बढाउन प्रशिक्षण प्रशिक्षक
भरतपुर, २२ चैत । नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष उमा रेग्मीले महिलाको नेतृत्व बढाउन स्थानीय तहको निर्वाचनलाई भरपुर उपयोग गर्नुपर्ने बताएकी छिन् ।
स्थानय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर नेपाल महिला संघले आयोजना गरेको प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष रेग्मीले आरक्षणमा मात्र सिमित नरही खुल्ला रुपमा प्रतिस्पर्धामा उत्रन महिला सक्षम रहेको उनले बताइन् । अधिवक्ता फूलमाया रानाभाटले संविधानले सुनिश्चित गरेका महिलाका पदहरुबारे जानकारी गराएकी थिइन् ।
महिलाहरु शारीरिक र मानसिक दुबै पक्षमा बलियो रहेको भन्दै उनले हरेक तह र तप्कामा नेतृत्व लिन सक्ने बताइन् । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा महानगरपालिकामा महिलाका सुनिश्चित गरिएका पदबाहेक पनि खुल्ला प्रतिष्पर्धामै जान महिला सक्षम रहेको उनले बताइन् । उनले महिला उम्मेदवार हुन सक्ने पद, उम्मेदवारीको प्रक्रियाबारे अभिमूखीकरण गरेकी थिइन् ।
नेपाल महिला संघ चितवनकी जिल्ला अध्यक्ष पार्वती शाहले कांग्रेसलाई बहुमतको पार्टी बनाउन नेताको निकटभन्दा पनि जनताको मनोभावनानिकटका व्यक्ति पहिचान गर्दै उम्मेदवार बनाउनुपर्ने तर्क गरिन् । कार्यक्रममा चितवनका ५ वटै निर्वाचन क्षेत्रका महिला संघ अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष एवम् नेतृहरु सहभागी थिए ।
प्रशिक्षक प्रशिक्षणमा सहभागी उनीहरुले अब आआफ्नो क्षेत्रका महिलालाई स्थानीय निकाय निर्वाचन र महिला उम्मेदवार चयन गर्न सहजीकरण गर्ने नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष रेग्मीले बताइन् ।
बालश्रम सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक
रत्ननगर, २२ चैत । पूर्वी चितवनको रत्ननगरमा बालबालिकाको अवस्था सम्बन्धी वेसलाईन सर्वेक्षण प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक गरिएको छ ।
युनिसेफ नेपालको सहयोगमा रत्ननगर नगरपालिका कार्यालय र रत्ननगर उद्योग वाणिज्य संघद्वारा सम्पन्न तथ्याङ्क संकलन कार्यक्रमबाट आएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । तथ्याङ्क अनुसार, रत्ननगर नगरपालिका क्षेत्रभित्र ४ सय २९ जना बालश्रमिक रहेको पाइएको छ ।
रत्ननगरका १६ वडामा गत असोजदेखि मंसिरसम्म गरिएको तथ्याङ्क संकलनको लागि संघले ४० जना गणक परिचालन गरेको संघका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर विसुरालले जानकारी दिए । कार्यक्रममा बाल संरक्षण तथा बालश्रम न्यूनीकरण कार्यक्रमका संयोजक दीपककुमार कर्मचार्यले बालश्रम न्यूनीकरण गर्न हरेक नागरिकको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउँदै सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा रहेको बताए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रत्ननगर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत अमरनाथ ढकालले सार्वजनिक तथ्याङ्क नगरपालिकाको सम्पत्तिको रुपमा रहने बताए । तथ्याङ्कको आधारमा कार्यक्रम निर्माण गरी बालश्रम अन्त्य गर्न नगरपालिका लागिपर्ने उनको भनाई छ ।
संघका अध्यक्ष विसुरालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नगरपालिकाका पूर्वमेयर नारायण वन, नेपाली काँग्रेसका नगर सभापति रुपनराज घिमिरे, नेकपा एमालेका नगर अध्यक्ष बद्रिनाथ घिमिरे, माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि गोविन्द विक, संघका सल्लाहर एवम् प्रतिवेदन निर्माणकर्ता कपिलदेव सुवेदी लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
विकासका लागि स्थानीय निर्वाचन
भरतपुर, २२ चैत । नेकपा (माओवादी) केन्द्रका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य लीलामणि पोख्रेलले गाउँ, सहर विकासका लागि स्थानीय निर्वाचन अपरिहार्य भएको बताएका छन् ।
नेकपा (माओवादी) केन्द्र भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. ९ को एकता वडा अभिवेशनलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै पोख्रेलले उक्त तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्न र जनप्रतिनिधिद्वारा जनअधिकार सुनिश्चित गर्न निर्वाचन गर्न लागिएको उनले बताए ।
चुनाव बहिस्कार गर्नु जनतासँगको सम्बन्ध विच्छेद गर्नु भएको भन्दै माओवादी नेता पोख्रेलले सबै दललाई निर्वाचनमा सहभागी हुन अनुरोध गरेका छन् । पार्टी निर्माण र निर्वाचन तत्कालीन कार्यनीति भएको बताउँदै उनले थपे ‘हाम्रो परिवर्तनको एजेण्डा जीवित राख्न जित्नैपर्छ, नत्र एजेण्डा हार्छ ।’
कांग्रेस, एमालेले नचाहँदा नचाहाँदै पनि संघीय संरचनामा स्थानीय निर्वाचन हुने वातावरण बन्दै गएको चर्चा गर्दै नेता पोख्रेलले यो निर्वाचनले केन्द्रिकृत राज्यव्यवस्थाको अन्त्य गर्ने कुरामा जोड दिए । पच्चीस वर्षसम्मको लोडसेडिङयुक्त मुलुक माओवादी सरकारको पालामा मुक्त हुँदै गएको बताउँदै उनले भने ‘जेठ महिनाबाट मुलुकभर लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरिँदैछ ।’
नेता पोख्रेलले जनयुद्धका सहिद विकास अधिकारीकी आमा इच्छामाया अधिकारीलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका चितवन, मकवानपुर, सिन्धुलीका इन्चार्ज सूर्य सुवेदीले अन्य पार्टीका नेताहरुले उम्मेदवारको स्वघोषणा गरेपनि आफ्नो पार्टीका नेताहरुले त्यसो नगर्ने र पार्टीले गरेको घोषणालाई मान्ने क्रान्तिकारी विचार रहेको बताए ।
वडा अध्यक्ष ज्ञानकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी) केन्द्रका जिल्ला इन्चार्ज ईश्वरी भट्टराई, संयोजक यमबहादुर परियार, सहइन्चार्ज घनश्याम दाहाल, वडा नम्बर ९ का इन्चार्ज निशा न्यौपाने लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
अधिवेशनले पुनः ज्ञानकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा २३ सदस्यीय वडा कमिटी गठन गरेको छ । जसको उपाध्यक्ष सीता लामिछाने, सचिवमा अमलकिरण ढकाल, कोषाध्यक्षमा तेजेन्द्र पौडेल र सहसचिवमा प्रेमप्रसाद कँडेल रहेका छन् ।
कालिकामा युवा संघ गठन
रत्ननगर, २२ चैत । पूर्वीचितवनको कालिका नगरपालिका वडा नं. ६ मा युवा संघ वडा कमिटी गठन गरिएको छ ।
सोमबार रेडक्रसग्राममा भएको भेलाले राजेन्द्र श्रेष्ठको अध्यक्षतामा १ सय १ सदस्यीय वडा कमिटी गठन गरेको हो । कमिटीको उपाध्यक्षमा सन्तोष सिलवाल, सचिव दीपेन्द्र कँडेल चयन भएका छन् ।
नेकपा एमाले वडा नं. ६ का संयोजक होमबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नेकपा एमाले जिल्ला सचिवालय सदस्य विनोद रेग्मी, क्षेत्रीय सदस्य दीपक लामिछाने, हिमलाल खतिवडा, वडा उपसंयोजक चेतबहादुर थापा लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
माण्डव्य गोत्रीयको साधारणसभा
गैँडाकोट, २२ चैत । माण्डव्य गोत्रीय समाज नेपाल, चितवन शाखाको दोस्रो साधारणसभा शनिबार गैँडाकोटमा सम्पन्न भएको छ ।
समाजका जिल्ला अध्यक्ष गंगाराम भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माण्डव्य समाज नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष किशोर ज्ञवाली रहेका थिए । कार्यक्रममा चितवन देवी ज्ञवाली, बुटवलका लक्ष्मीनारायण भण्डारी र विष्णुप्रसाद भण्डारीले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
साधारणसभाले देवघाटधाममा माण्डव्य ऋषिको मन्दिर र वृद्धाश्रम निर्माण गर्ने, माण्डव्य गोत्रीय समाज नेपाल र माण्डव्य समाज नेपालको एकीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यक्रममा ७० जनालाई सम्मान तथा सदस्यता वितरण गरिएको थियो ।
कलेज क्रिकेटको उपाधि विरेन्द्रलाई
चितवन, २२ चैत । तेस्रो अन्तर सिएसआइटी कलेज क्रिकेट टुर्नामेन्टको उपाधि विरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसले उचालेको छ ।
सिएसआइटी एसोसिएसन नेपाल चितवनले आयोजना गरेको प्रतियोगिताको फाइनलमा इन्द्रेणी कलेजलाई पछि पार्दै विरेन्द्रको समूह विजयी भएको हो । टस जितेर व्याटिङ रोजेको विरेन्द्रको सिएसआइटी समूहले एक सय ४४ रन जोडेको थियो ।
एक सय ४५ रनको विजयी लक्ष्य लिएर मैदानमा उत्रिएको इन्द्रेणी कलेज एक सय २१ रनमा समेटिएपछि विरेन्द्रले उपाधि चुम्न सफल भएको हो । खेलको म्यान अफ दि म्याच विरेन्द्रका नविन गुरुङ भएका छन् । खेलको म्यान अफ दि सिरिज विरेन्द्रकै सुदेश खतिवडा भएका छन् ।
तेस्रो अन्तर सिएसआइटी कलेज क्रिकेट टुर्नामेन्टमा चितवनका सिएसआइटी अध्ययन गराइने ३ वटा कलेजका विद्यार्थी सहभागी भएको कार्यक्रम संयोजक सुशील सुवेदीले जानकारी दिए । १८ गतेबाट सुरु भएको प्रतियोगिता अन्तर्गत विरेन्द्र क्याम्पस र आइसीटी कलेजबीच भएको पहिलो दिनको खेलमा विरेन्द्रका विवेक पौडेल म्यान अफ दि म्याच घोषित भए ।
दोस्रो दिनमा इन्द्रेणी कलेजका अमृत श्रेष्ठ र तेस्रो दिनमा इन्द्रेणीका राजु पौडेल म्यान अफ दि म्याच भए । सबै खेलमा उत्कृष्ट भएकालाई ट्रफी तथा मेडल प्रदान गरिएको सिएसआइटी एसोसिएसन नेपाल चितवनका अध्यक्ष अमृत पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।
समापन समारोहमा विरेन्द्र क्याम्पस प्रमुख गोविन्द सापकोटा, इन्द्रेणी कलेजका उपप्राध्यापक जीवन पण्डितले आइटीका विद्यार्थीहरु खेलकुद र रचनात्मक क्रियाकलापमा सक्रिय हुन आवश्यक रहेको बताए । सामाजिक रुपमा सक्रिय रहंदै पढाईलाई निरन्तरता दिन उनीहरुले जोड दिएका छन् ।
चितवनमा निर्वाचनका लागि महिला सक्रियता बढ्यो, को को छन् मयेरका आकांक्षि
चितवन, २० चैत । बैशाख ३१ गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख पदमध्ये एक पदमा महिला उम्मेदवार अनिवार्य रहने व्यवस्था भएपछि महिला सक्रियता बढेको छ ।
सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा आवद्ध एवं केन्द्रीय स्तरदेखि लिएर स्थानीय तहमा कुनै न कुनै भूमिकामा रहेर काम गरेका महिलाले आफ्नो पार्टीलाई टिकट दिनको लागि दबाब दिइरहेका छन् । राजनीतिक दलका महिला संगठन चुनावी प्रचारमा लागेका छन् । कतिपय नगर र गाउँपालिकामा राजनीतिक दलहरुले ईच्छुक, योग्य, क्रियाशील महिला उम्मेदवारको खोजी गरिरहेका छन् ।
चितवनमा एक महानगरपालिका, पाँच नगरपालिका र एक गाउँपालिकामा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ । त्यसमध्ये जिल्लाको आधाभन्दा बढी जनसंख्या रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा पनि महिलाहरुले मेयरको प्रस्ताव राख्दै आआफ्ना पार्टीलाई दबाब दिइरहेका छन् । जिल्लामा नगर तथा गाउँपालिकाको प्रमुख पदमा अधिकांश राजनीतिक दलहरुले पुरुषलाई नै अघि सार्ने र उपप्रमुखमा महिलालाई मौका दिने मनस्थिति बनाएको पाइन्छ ।
भरतपुर महानगरपालिकामा विभिन्न राजनीतिक दलबाट महिला नेतृहरुले उम्मेदवारी दिने जमर्को गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय सभापति उमा रेग्मी, जिल्ला अध्यक्ष पार्वती शाह, नेपाली कांग्रेस चितवन क्षेत्र नम्बर चारकी सभापति सरिता केसी, पूर्व जिल्ला अध्यक्ष शारदा पौडेल लगायतले महानगरपालिकाको मेयर पदको दाबी गरेका छन् ।
नेकपा एमालेका तर्फबाट पनि भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदमा आकांक्षा देखाउने महिलाको संख्या कम छैन । स्रोतका अनुसार, नेकपा एमाले चितवनकी सचिव पार्वती रावलको चर्चा बढी छ । उनी संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन र उपनिर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर चारबाट संविधानसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकी थिइन् । जिल्ला सहसचिव सूर्यवदना हमाल, सचिवालय सदस्य पार्वती सिलवाल, पूर्व नगर समिति सदस्य रजनी मास्केले समेत मेयरको टिकट पाउन दाबी गरेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट केन्द्रीय स्तरका नेतृहरुले मेयरको आकांक्षा देखाएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रकी सदस्य पार्वती रिजाल, पार्वती न्यौपाने, पोलिटब्यूरो सदस्य ज्ञानु बस्नेतको नाम चर्चामा छ । धेरैजसो नगरपालिका र गाउँपालिकामा महिला कुन दलबाट कुन पदमा उम्मेदवार बन्लान् भन्ने अनुमान गर्न कठिन छ । तर महिला नेतृहरुले मेयर पदमा टिकट नपाए उपमयेरमा आउनको लागि भएपनि मेयर पदमा आकांक्षा देखाएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
रत्ननगर नगरपालिकामा पनि मेयर पदका आकांक्षी महिला रहेका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट जिल्ला प्रवक्ता निता ढकालले मेयर पदको टिकट पाउनको लागि पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेकी छिन् । नेपाल महिला संघकी पूर्व जिल्ला सदस्य लक्ष्मी चौधरी, शारदा पौडेल, महाधिवेशन प्रतिनिधि गीता देवकोटाको नाम पनि चर्चामा छ । एमालेबाट अखिल नेपाल महिला संघका जिल्ला सदस्यहरु मायादेवी खतिवडा, विमला दुवाडी, ज्वाला वन, ऐन्जिला कुँवर आकांक्षी रहेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जिल्ला सहइन्चार्ज कञ्चन खनाल र केन्द्रीय सदस्य तथा अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) जिल्ला अध्यक्ष संगिता भट्टराईको नाम चर्चामा छ ।
खैरहनी नगरपालिकामा कांग्रेसबाट नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय सदस्य सुशिला उप्रेती, जिल्ला सदस्य कमला श्रेष्ठ, राममाया कँडेलको नाम चर्चामा छ । एमालेबाट पूण्यप्रभा अधिकारी, सकुन्तला अधिकारी, शान्ति चौधरीको नाम अगाडि आएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट भने अहिलेसम्म आकांक्षी महिला कोही देखिएका छैनन् ।
राप्ती नगरपालिकामा प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा नेपाली कांग्रेसबाट शिवमाया भट्टराईको नाम अग्रपंक्तिमा छ । एमालेबाट मेनुका पाठक, बबिता बुर्लाकोटी, पुष्पा केसी, सुनिता सिलवालको नाम चर्चामा छ । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट डिलमाया बुढाथोकी, पार्वती कँंडेल, कृष्णमाया रानाभाट आकांक्षी रहेका छन् ।
कालिका नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट निरुजा श्रेष्ठ, कमला पौडेलको नाम अगाडि छ । एमालेबाट विमला लामा, भवानी अधिकारी, कमला भट्टराई, अनिता पौडेलको नाम चर्चामा छ । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सविता लामाले आकांक्षा देखाएकी छिन् ।
माडी नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट अहिलेसम्म महिला आकांक्षीको नाम सुनिएको छैन । एमालेबाट सरस्वती विष्ट र तारा महतो तथा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सावित्री पाण्डेको नाम चर्चामा छ । चितवनको एकमात्र गाउँपालिका इच्छाकामनामा नेपाली कांग्रेसबाट गीता गुरुङ, एमालेबाट जुना राजभण्डारी, माया गुरुङ, माया सिलवाल र माओवादी केन्द्रबाट सावित्री सिलवालको नाम चर्चामा रहेको छ ।
२०५४ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदा कार्यसमितिमा एक जना महिला अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसपटक केन्द्रमा ३३ प्रतिशत, स्थानीय तह र प्रदेशमा महिलाको उपस्थिति ४० प्रतिशत रहनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।